Iye Zvino Izwi - - NaMark Mallett -
Mumhanzi & Zviitiko
ZVEVANHU & RUSUNUNGUKO
MUEDZO WEGORE GORE
WEBCAST & MAVHIDZO
KUNO BATSIRA DENGA
Mimwe mhinduro ...
Hurombo Hwazvino Nguva Ino
Posted on January 13, 2022 January 16, 2022 by maka
Kana iwe uri munyoreri kuThe Now Shoko, ita shuwa kuti maemail kwauri "akacheneswa" nemupi wako wepainternet nekubvumira email kubva ku "markmallett.com". Zvakare, tarisa yako junk kana spam folda kana maemail ari kuguma ipapo uye iva nechokwadi chekumaka se "kwete" junk kana spam.
PANO chimwe chinhu chiri kuitika chatinofanira kupa ngwariro kwachiri, chimwe chinhu icho Ishe ari kuita, kana kuti mumwe munhu anogona kutaura, achibvumira. Zvino ndiko kubviswa kweMwenga waKe, Amai Chechi, hanzu dzavo dzenyika nedzine tsvina, kusvikira vamira vasina kupfeka pamberi paKe.Ramba kuverenga →
Mhinduro kuna Jimmy Akin - Chikamu 2
Posted on January 11, 2022 January 12, 2022 by maka
MHINDURO dzeKatorike cowboy apologist, Jimmy Akin, anoenderera mberi aine burr pasi pechigaro chake pawebhusaiti yedu yehanzvadzi, Kuenda kuhumambo. Heino mhinduro yangu kune yake yazvino kupfura ...Ramba kuverenga →
Posted on January 5, 2022 January 8, 2022 by maka
... hakuna bofu rinopfuura uyo asingadi kuona,
uye pasinei nezviratidzo zvenguva dzakafanotaurwa.
kunyange vaya vanotenda
ramba kutarisa zviri kuitika.
-Mukadzi Wedu kuna Gisella Cardia, Gumiguru 26, 2021
NDIRI Kufanirwa kunyara nemusoro wechinyorwa ichi - kunyara kutaura mutsara wekuti "nguva dzekupedzisira" kana kutora mashoko muBhuku raZvakazarurwa ndoda kutaura nezvemionero yeMarian. Zvinyakare zvakadaro zvinofungidzirwa kuti ndezvekutenda mashura kwekare pamwe chete nedzidziso dzekare mu "zvakazarurwa zvakavanzika", "chiporofita" uye izvo zvinonyadzisa zve "chiratidzo chechikara" kana kuti "Anopesana naKristu." Hungu, zviri nani kuvasiira kunguva iyoyo yokungwarira apo chechi dzeKaturike dzaipfungaira zvinonhuwira sezvadzaidzinga vasande, vaprista vaiparidza vahedheni, uye vanhuwo zvavo vaidavira chaizvoizvo kuti kutenda kwaigona kudzinga madambudziko namadhemoni. Mumazuva iwayo, zvidhori nemifananidzo zvaisangoshongedza machechi chete asi zvivako zvavose nedzimba. Fungidzira izvozvo. "Nguva yerima" - vakavhenekerwa vasingatendi kuti kuna Mwari vanodzidaidza.Ramba kuverenga →
Posted on December 24, 2021 December 25, 2021 by maka
JESU akaberekwa usiku. Akazvarwa panguva apo kunetsana kwakazadza mhepo. Akazvarwa panguva yakafanana neyedu. Izvi zvingatadza sei kutizadza netariro?Ramba kuverenga →
PaMisa Inoenda Mberi
Posted on December 21, 2021 December 23, 2021 by maka
…Chechi yega yega inofanira kuenderana neChechi yepasi rose
kwete chete pamusoro pedzidziso yekutenda nezviratidzo zvesakaramende;
asiwo nezvemashandisirwo anogamuchirwa pasi rose kubva kutsika dzevapostora nedzisina kuputswa.
Izvi zvinofanirwa kucherechedzwa kwete chete kuti kukanganisa kudziviswa,
asiwo kuti kutenda kupfuvurwe mukururama.
sezvo mutemo weChechi wekunamata (lex orandi) zvinoenderana
kumutemo wake wekutenda (lex credendi).
—Murairo Mukuru weRoman Missal, 3rd ed., 2002, 397
IT zvingaita sezvisinganzwisisike kuti ndiri kunyora nezvedambudziko riri kuitika pamusoro peMisa yechiLatin. Chikonzero ndechekuti handisati ndambopinda chechi yenguva dzose yeTridentine muupenyu hwangu.Ndakaenda kumuchato weTridentine rite, asi mupristi haana kuita seaiziva zvaaiita uye dzidziso yese yakanga yakapararira uye isinganzwisisike. Asi ndosaka ndiri munhu asina kwaakarerekera ndiine tariro chimwe chinhu chinobatsira kuwedzera kuhurukuro…Ramba kuverenga →
Ndakaenda kumuchato weTridentine rite, asi mupristi haana kuita seaiziva zvaaiita uye dzidziso yese yakanga yakapararira uye isinganzwisisike.
Kuchengetedza Vatsvene Venyu Vasina Mhosva
Posted on December 21, 2021 December 22, 2021 by maka
Renaissance Fresco inoratidzira Kuurayiwa Kwevasina Mhosva
muCollegiata yeSan Gimignano, Italy
CHINHU yakashata zvikuru apo muvambi weruzivo rwokugadzira zvinhu, zvino mukuparadzirwa pasi rose, ari kudaidzira kuti imiswe pakarepo. Mune iyi webcast inokatyamadza, Mark Mallett naChristine Watkins vanogovera chikonzero nei vanachiremba nesainzi vari yambiro, zvichibva paruzivo rutsva uye zvidzidzo, kuti kubaya vacheche nevana nejene therapy kunogona kuvasiya vaine chirwere chakakomba mumakore anotevera… imwe yeyambiro dzakanyanya kukosha dzatapa gore rino. Kufanana nekurwisa kwaHerodhi Vasina Mhosva Vatsvene mukati memwaka uno weKirisimasi hakuna mubvunzo. Ramba kuverenga →
Mhinduro kuna Jimmy Akin
Posted on December 15, 2021 December 23, 2021 by maka
CATHOLIC murevereri Jimmy Akin akanyora chinyorwa chinobvunza kuvimbika kwewebhusaiti yehanzvadzi yangu, Kuverengera kuHumambo.Ramba kuverenga →
New Novel Release! Ropa
Posted on December 10, 2021 December 10, 2021 by maka
PRINDA vhezheni yekutevera Ropa yave kuwanikwa!
Kubva pakaburitswa bhuku rekutanga remwanasikana wangu Denise Muti makore manomwe apfuura - bhuku rakawana wongororo uye kuedza kwevamwe kuti riitwe bhaisikopo - takamirira kuenderera mberi. Uye zvasvika pakupedzisira. Ropa inoenderera mberi nenyaya munzvimbo yengano nezwi rinoshamisa raDenise rekugadzira mavara echokwadi, kugadzira mifananidzo inoshamisa, uye kuita kuti nyaya itore nguva refu mushure mekunge waisa bhuku pasi. Matheme mazhinji mukati Ropa taura zvakadzama kunguva yedu. Handina kukwanisa kudada sababa vake… uye kufara semuverengi. Asi usatore izwi rangu pazviri: verenga wongororo pazasi!Ramba kuverenga →
Posted on December 8, 2021 December 8, 2021 by maka
AS hurumende dzepasi rese dzinotanga kumanikidza majekiseni anosungirwa uku vachityisidzira "vasina kubayiwa", ndiani chaizvo ari kutamba Russian Roulette nehupenyu hwevamwe, ndoda yavo? Ramba kuverenga →
Fatima, uye Kudengenyeka kukuru
DZIMWE nguva yapfuura, pandakafunga kuti sei zuva raiita kunge richamhanya pamusoro pedenga kuFatima, njere yakauya kwandiri kuti kwaisave chiratidzo chezuva rinofamba per se, asi pasi. Ndipo pandakafunga nezve kubatana pakati pe "kuzunza kukuru" kwepasi kwakafanotaurwa nevaporofita vazhinji vakavimbika, uye "chishamiso chezuva." Nekudaro, nekuburitswa kwazvino kwaSr.Lucia's memoirs, nzwisiso nyowani muChitatu Chakavanzika chaFatima chakaburitswa muzvinyorwa zvake. Kusvika pari zvino, izvo zvataiziva nezvemberi yechirango chakamiswa (icho chatipa ino "nguva yengoni") chakatsanangurwa pawebhusaiti yeVictoria:Ramba kuverenga →
Mepu yekudenga (5)
KUTANGA PATSVA (5)
KUTENDA NENZIRA (179)
ZVEVANHU & RUSUNUNGUKO (7)
MASS KUVERENGA (311)
HUPENYU HWANGU (5)
KUFANANA NOKUTYA (37)
MUNAMATO RETREAT (44)
MUEDZO WEGORE GORE (11)
KUDA KWAMWARI (22)
NGUVA YERUGARE (76)
ZVIKWERE ZVEMHURI (14)
UROMBO HWESHANU (7)
KUEDZA KUKURU (250)
CHOKWADI CHAKAOMA (44)
CHENJERI ITSVA (10)
NGUVA YENYASHA (122)
MITAMBO YENYENZO! (10)
MAVHIDHI & PODCASTS (83)
MIRA MINETI (3)
KUNO BATSIRA DENGA (7)
NEI CHIKOLIKI? (9)
matura oruzivo Select Month Ndira 2022 (3) Zvita 2021 (7) Mbudzi 2021 (7) Gumiguru 2021 (6) Nyamavhuvhu 2021 (5) Nyamavhuvhu 2021 (5) Chikunguru 2021 (3) Chikumi 2021 (2) Chivabvu 2021 (6) Kubvumbi 2021 (6) Kurume 2021 (9) Kukadzi 2021 (10) Ndira 2021 (9) Zvita 2020 (9) Mbudzi 2020 (8) Gumiguru 2020 (15) Nyamavhuvhu 2020 (6) Nyamavhuvhu 2020 (6) Chikunguru 2020 (11) Chikumi 2020 (13) Chivabvu 2020 (9) Kubvumbi 2020 (11) Kurume 2020 (12) Kukadzi 2020 (7) Ndira 2020 (10) Zvita 2019 (7) Mbudzi 2019 (11) Gumiguru 2019 (7) Nyamavhuvhu 2019 (6) Nyamavhuvhu 2019 (1) Chikunguru 2019 (4) Chikumi 2019 (6) Chivabvu 2019 (9) Kubvumbi 2019 (15) Kurume 2019 (5) Kukadzi 2019 (9) Ndira 2019 (7) Zvita 2018 (3) Mbudzi 2018 (10) Gumiguru 2018 (8) Nyamavhuvhu 2018 (5) Nyamavhuvhu 2018 (4) Chikunguru 2018 (3) Chikumi 2018 (6) Chivabvu 2018 (13) Kubvumbi 2018 (11) Kurume 2018 (8) Kukadzi 2018 (13) Ndira 2018 (11) Zvita 2017 (10) Mbudzi 2017 (10) Gumiguru 2017 (11) Nyamavhuvhu 2017 (9) Nyamavhuvhu 2017 (11) Chikunguru 2017 (9) Chikumi 2017 (9) Chivabvu 2017 (10) Kubvumbi 2017 (8) Kurume 2017 (9) Kukadzi 2017 (8) Ndira 2017 (9) Zvita 2016 (14) Mbudzi 2016 (13) Gumiguru 2016 (6) Nyamavhuvhu 2016 (15) Nyamavhuvhu 2016 (7) Chikunguru 2016 (6) Chikumi 2016 (9) Chivabvu 2016 (10) Kubvumbi 2016 (7) Kurume 2016 (25) Kukadzi 2016 (21) Ndira 2016 (8) Zvita 2015 (7) Mbudzi 2015 (9) Gumiguru 2015 (11) Nyamavhuvhu 2015 (9) Nyamavhuvhu 2015 (5) Chikunguru 2015 (8) Chikumi 2015 (8) Chivabvu 2015 (9) Kubvumbi 2015 (9) Kurume 2015 (27) Kukadzi 2015 (17) Ndira 2015 (11) Zvita 2014 (10) Mbudzi 2014 (7) Gumiguru 2014 (21) Nyamavhuvhu 2014 (21) Nyamavhuvhu 2014 (6) Chikunguru 2014 (6) Chikumi 2014 (5) Chivabvu 2014 (19) Kubvumbi 2014 (22) Kurume 2014 (26) Kukadzi 2014 (24) Ndira 2014 (27) Zvita 2013 (24) Mbudzi 2013 (6) Gumiguru 2013 (5) Nyamavhuvhu 2013 (3) Nyamavhuvhu 2013 (2) Chikunguru 2013 (4) Chikumi 2013 (1) Chivabvu 2013 (6) Kubvumbi 2013 (7) Kurume 2013 (11) Kukadzi 2013 (10) Ndira 2013 (3) Zvita 2012 (2) Mbudzi 2012 (3) Gumiguru 2012 (3) Nyamavhuvhu 2012 (5) Nyamavhuvhu 2012 (1) Chikunguru 2012 (3) Chikumi 2012 (5) Chivabvu 2012 (2) Kubvumbi 2012 (5) Kurume 2012 (5) Kukadzi 2012 (7) Ndira 2012 (6) Zvita 2011 (8) Mbudzi 2011 (6) Gumiguru 2011 (7) Nyamavhuvhu 2011 (3) Nyamavhuvhu 2011 (5) Chikunguru 2011 (4) Chikumi 2011 (9) Chivabvu 2011 (4) Kubvumbi 2011 (1) Kurume 2011 (4) Kukadzi 2011 (3) Ndira 2011 (7) Zvita 2010 (7) Mbudzi 2010 (5) Gumiguru 2010 (5) Nyamavhuvhu 2010 (5) Nyamavhuvhu 2010 (3) Chikunguru 2010 (5) Chikumi 2010 (7) Chivabvu 2010 (9) Kubvumbi 2010 (14) Kurume 2010 (8) Kukadzi 2010 (9) Ndira 2010 (5) Zvita 2009 (8) Mbudzi 2009 (6) Gumiguru 2009 (5) Nyamavhuvhu 2009 (4) Nyamavhuvhu 2009 (4) Chikunguru 2009 (7) Chikumi 2009 (7) Chivabvu 2009 (5) Kubvumbi 2009 (8) Kurume 2009 (2) Kukadzi 2009 (8) Ndira 2009 (13) Zvita 2008 (10) Mbudzi 2008 (9) Gumiguru 2008 (11) Nyamavhuvhu 2008 (10) Nyamavhuvhu 2008 (7) Chikunguru 2008 (2) Chikumi 2008 (5) Chivabvu 2008 (7) Kubvumbi 2008 (8) Kurume 2008 (10) Kukadzi 2008 (7) Ndira 2008 (5) Zvita 2007 (12) Mbudzi 2007 (9) Gumiguru 2007 (5) Nyamavhuvhu 2007 (10) Nyamavhuvhu 2007 (8) Chikunguru 2007 (5) Chikumi 2007 (5) Chivabvu 2007 (6) Kubvumbi 2007 (7) Kurume 2007 (4) Kukadzi 2007 (6) Ndira 2007 (10) Zvita 2006 (9) Mbudzi 2006 (10) Gumiguru 2006 (10) Nyamavhuvhu 2006 (24) Nyamavhuvhu 2006 (19) Chikunguru 2006 (16) Chikumi 2006 (21) Chivabvu 2006 (17) Kubvumbi 2006 (19) Kurume 2006 (22) Kukadzi 2006 (16) Ndira 2006 (16) Zvita 2005 (10) Mbudzi 2005 (1) Chikumi 2005 (1) Kubvumbi 2003 (1) Kurume 2003 (1)
Wakabudirira kubatana neyeedu vanyori runyorwa.
Dhizaini webhusaiti © 2022 tiDesign